दीपिका पादुकोणको सम्पत्ति कति ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
दीपिका पादुकोणको सम्पत्ति कति ???
दीपिका पादुकोण बलिउडमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताइसकेकी चर्चित नायिका हुन् । पछिल्लो केही वर्षयता उनको फिल्महरुले बलिउडमा एकपछि अर्को सफलता पाइरहेको छ । सोहीकारण चलचित्र निर्माताहरुको रोजाइमा उनी पर्ने गरेकी छिन् ।
उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरेको करिब १० करोड भारतीय रुपैयाँ लिने गर्छिन् । दीपिकाले झण्डै ३० वटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । बलिउडमा मात्रै होइन दीपिकाले हलिउड फिल्ममा पनि पाइला चालिसकेकी छिन् । उनले चर्चित हलिउड स्टार भेन डिजेलसँग चलचित्र ट्रिपल एक्समा पनि अभिनय गर्न भ्याइसकेका छन् ।
दीपिकाले चलचित्र क्षेत्रबाट मात्रै होइन विज्ञापनहरुमा अभिनय गरेर पनि पैसा कमाउने गर्छिन् । दीपिकाले ओप्पो मोबाइल, पेप्सी, नेसक्याफे, भोग आईवेर, सोनी साइबर सट, टिसोट, गर्नियार लगायतको कम्पनीहरुको विज्ञापनमा खेलिसकेकी छिन् ।
सफल नायिका पादुकोणको सम्पत्ति १० मिलियन डलरभन्दा धेरै छ ।
३१ वर्षीय नायिका दीपिकासँग ७० लाख भारतीय रुपैयाँ पर्ने आउडी गाडी समेत रहेको छ । गत महिना अघिमात्रै उनले मुम्बाईमा घर समेत खरिद गरिसकेकी छिन् । आफ्नै कमाइले मुम्बाईमा घर खरिद गर्न सक्ने दीपिकामात्रै बलिउडको एक नायिका हुन् । – नेपालीपत्रबाट साभार